XOG:- Shirweyne lagu taageerayo musharaxnimada Xasan Sheekh oo ka dhacaya Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Shirweyne lagu taageerayo musharaxnimada Xasan Sheekh oo ka dhacaya Muqdisho
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta mid ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho ku qabanaya shir-weyne lagu taageerayo musharaxnimadiisa xilka madaxweynaha ee doorashada dalka ka dhici doonto sanadkaan 2016-ka.
Shirkaan oo maanta ka dhici doono Hoteelka City Palace ayaa ah mid madaxweyne Xasan Sheekh lagu taageerayo inuu markale dib ugu soo laabto taladda dalka Soomaaliya, iyadoona mudooyinkii ugu dambeeysay ay qaban-qaabada shirkaas socotay.
Waxaaa la sheegayaa in taageerayaasha madaxweyne Xasan Sheekh ay waqti hore bilaabi doonaan ololaha ay ku doonayaan in mar labaad uu Xasan Sheekh kusoo laabto xilka madaxweynaha Soomaaliya, xilli wasaaradda amniga gudaha ay mamnuucday in iyadoo aan fasax laga heysan in shirar siyaasadeed lagu qabto hoteelada Muqdisho.
Ilo-xog ogaal ah ayaa inoo xaqiijiyay in madaxweyne Xasan Sheekh uu heysto hanti badan oo u xaqiijineysa inuu helo codadka ugu tirada badan xildhibaanada labada aqal ee Baarlamaanka cusub Soomaaliya.
Dhinaca kale, musharaxiinta iyo xisbiyadda siyaasadda ayaa dacwad ka dhan ah wasaaradda amniga gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya u gudbiyay maxkamadda sare ee dalka, iyagoo kasoo horjeeda in laga joojiyo shirarkii ay ku yeelan lahaayeen hoteelada Muqdisho.